त्यस दिनको बैठकमा पनि उहाँ कसैलाई सल्लाह दिँदै हुनुहुन्थ्यो- ‘आ दिदी, तपाईं पनि छोरो बिग्रियो भनेर कति पिर गर्नहुन्छ? खुरुक्क एउटा केटी खोजेर बिहे गर्दिनुस् न, सुध्रिहाल्छ नि।’
अलि समय अघि मात्र कान्तिपुरको शनिबारे अंकमा प्रकाशित मेरो एउटा अनुभवजनित आलेख पढेपछि उहाँले भन्नु भएको थियो- ‘तिमी आजकल खुब विद्रोही भएकी छौ त सानी, के भयो त्यस्तो?’
उहाँको त्यस्तो प्रश्नवाचक प्रतिक्रियाको जवाफमा मैले भनेको थिएँ- ‘समाचार बटुलेर मात्र हुँदो रहेनछ अन्टी, सामाजिक समस्याको समाधान खोज्न चर्कै आवाज चाहिँदो रहेछ।’
त्यसपछि उठेर भित्र गएँ र आँट निकालेरै भनेँ- ‘ए अन्टी, मेरी एउटी साथी छिन्, त्यसरी नै कुलतमा फसेकी। हजुरको छोराको बिहे उनैसँग गरिदिऊँ न, हुन्छ? किनभने हजुरको छोरा निकै सोझो, भलाद्मी र इमान्दार पनि हुनुहुन्छ। मेरो साथी सुध्रिन्छे कि! जीवन त सबैको उति नै अमूल्य होइन र?’
एउटा अलि फरक तर सान्दर्भिक प्रसंग सम्झिएँ। क्याम्पसमा हामीलाई जेन्डर पढाउने पुरुष प्रोफेसरले एक दिन आफ्नो पर्सबाट श्रीमतीको एटीएम कार्ड निकालेर देखाउँदै गर्वका साथ भन्नुभयो- ‘यो कार्ड उनको नाममा छ तर आवश्यकता कहिल्यै पर्दैन। किनभने बैंकबाट पैसा निकाल्ने र चाहिएका सामान किनमेल गर्ने काम मेरै हुन्छ। आउजाउ गर्ने साधन (गाडी) मैसँग हुन्छ, उनलाई झन्झटै छैन।’
‘यसलाई यति भए पुग्छ। माइती नै टुङ्ग्याएर केको अंश लिनु? पछि माइती चाहिदैन?’ उनीहरुबाट सुनिने अंश लिन लागेकी छोरीप्रति लक्षित केही प्रतिनिधि अभिव्यक्ति यस्ता हुन्छन्। हामीले कानुनी अधिकारका अबरोध पन्छाउन यस्तो एकात्मक सोच भएकाहरूसँग कति पो लड्नुपर्ने हो!
नत्र नारीको सम्मान विरुद्ध सदियौँदेखि संगठित सामाजिक संरचनाको पक्षपाती अदालतले एकतर्फी बहस चलाइराख्ने छ र आफै न्यायाधीश बनेर निर्मम फैसला सुनाउनेछ- ‘तिमी नारी हौ, त्यसैले तिमीले सहनु पर्छ।’